Noafahana ilay bilaogera Koranista Ejiptiana · Global Voices teny Malagasy
Noafahana ilay bilaogera Koranista Ejiptiana
Voadika ny 26 Janoary 2019 20:30 GMT
Navotsotra ny 23 Janoary 2009 ilay bilaogera Ejiptiana, Reda Abdel-Rahman (32 taona) rehefa notanana hatramin'ny volana Oktobra 2009. Mpiasa ara-tsosialy tao amin'ny Ivontoeram-pivavahana mifandray amin'i Al-Azhar i Reda. Ity bilaogera tanora ity dia fantatra amin'ny maha “Koranista” (mpandala ny Coran) azy izay tsy mankato ny Sunnah (izay midika hoe “ny fomba amam-panaon'ny mpaminany Muhammad” – wikipedia) ary mihevitra fa ny Coran no hany loharanon'i Shariaa (ny lalàna fototry ny finoana Islamika).
ANampiasa ny bilaoginy ” Rariny, Fahalalahana ary Fiadanana” i Abdel-Rahman mba hampiroboroboana ny hevitry ny hetsika fandalàna ny Coran . Na izany aza, Abdel-Rahman ihany koa dia mpikambana ao amin'ny fianakavian'i Ahmed Subhy Mansour . Mansour dia manam-pahaizana ejipsiana noheverina ho Rain'ny Koranista.
Nilaza ny Foiben'ny Korany Masina Iraisampirenena tao anaty fanambarana fa na dia efa navotsotra herinandro lasa aza izay i Reda dia mbola nihorohoro tamin'ny zavatra niainany ary nilaza tamin'ny namany sy ny fianakaviany ny tantara nanohina tamin'ny fampidirana azy am-ponja, toy izao ny tenin'i Abdelrahman izay navoaka tao anatin'ilay fanambarana:
I was severely beaten and humiliated in my first two weeks to reveal the password of my personal email…They also electrified me to force me to confess to crimes I haven't made.
Nokapohina mafy aho ary nalaina baraka nandritra ny roa herinandro voalohany mba hilaza ny tenimiafin'ny mailako manokana … Nodoran'izy ireo tamin'ny herinaratra ihany koa aho hanereny ahy hibaboka amin'ny heloka tsy nataoko.
Nosamborina tamin'ny volana Oktobra 2008 i Abdel Rahman; Nalain'ny polisy tany an-tranony izy ary nentiny tany amin'ny toerana tsy fantatra, ary nalain'izy ireo ny solosainy sy ny kapila CD maro tao an-tranony. Voampanga ho “naniratsira ny finoana Miozolomana” izy rehefa nanontanian'ny manampahefana ny fomba fivavahany.
Araka ny hevitry ny Hetsika Ejiptiana ho an'ny Zon'Olombelona (EIPR), dia voalaza fa nohadihadian'ny sampan-draharaham-pitsarana i Abdel-Rahman momba ny lahatsoratra navoakany an-tserasera ary noterena nanao sonia ny fanambarana izay nanekeny fa “hampiato ny famoahany ny lahatsoratra rehetra amin'ny Aterineto sy ny asa soratra momba ny fivavahana izy. “Nilaza ny EIPR fa efa nohadihadian'ny fiarovam-panjakana momba ny finoany ara-pivavahana i Abdel-Rahman, farafahakeliny indroa talohan'ny nanjavonany.